Duqeyn iyo iskahorimaad ka dhacay deegaano ka tirsan gobolka Sh/hoose – STAR FM SOMALIA
Duqeyn iyo iskahorimaad ka dhacay deegaano ka tirsan gobolka Sh/hoose
Diyaaradaha qumaatiga u kaca ayaa weeraray saldhig ay Al-Shabaab ku lahaayeen deegaan dhinaca Waqoyi ka xiga degmada Qoryoley ee gobolka Sh/hoose.
Sida ay sheegayaan wararka ka imanaya deegaankaas iska horimaad hubeysan iyo duqeyn ayaa ka dhacday saldhigan iyadoo uu dagaalkaasi ka dhashay qasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac.
Sida ay sheegtay idaacada ku hadasha Codka Maraykanka laanteeda Afka Soomaaliga ugu yaraan toddobo ka mid ah dagaalyahanada ururka Alshabaab ayaa lagu diley weerarkan.
Dhinaca kale iska horimaad hubeysan ayaa ku dhex maray meel ku dhow deegaanka Golweyn ciidamo AMISOM ka tirsan iyo dagaalyahano ururka Alshabaab taabacsan.
Dagaalkan ayaa dhacay kadib markii kolonyo gaadiid oo ay ciidamada AMISOM lahaayeen weerar gaadmo ah lagu qaaday iyadoo mid kamid ah gaadiidka AMISOM ay wateen uu gubtay.
Dhinaca Alshabaab ayaa la sheegay in looga diley weerarkan saddex kamid ah kooxdii weerarka qaaday.
Keating oo sheegay in doorashada madaxweynaha dib u dhac ku imaan karo lana qaban doono December
Cumar dhagey Gudoomiyaha Gudga Doorashooyinka Baarlamaanka ayaa Go aan kaqaadanayo waqtga doorashara.